မြန်မာသူငယ်ချင်းနေ့အဖွဲ့ အလှူ – JQY's Blog
ကျွန်တော်တို့ http://www.myanmarfriendsday.com (မြန်မာသူငယ်ချင်းများနေ့) အဖွဲ့မှ အလှူခံရငွေပေါင်း ၃၅၀၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးကောဝိဒမှ အောက်ပါပစ္စည်းများ လှူဒါန်းစေခဲ့တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့မှ
၂။ DVD Writer
ဦးကောဝိဒထံသို့ မမေနွယ်သိန်းမှ လှူဒါန်းနေပုံ
တို့လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် UPS ကိုပြန်ထည့်တာက UPS အလှူရှင်က သူ့စာရင်းကို Myanmar Friends Day ထဲသို့သာ ထည့်ပေးပါလို့ ပြောလာလို့ပါ။ ပိုငွေ ပေါင်း ၁၉၀၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီငွေများကို ကျွန်တော်တို့မှ ဦးကောဝိဒအတွက် အထွေထွေအသုံးစရိတ်အဖြစ်ဖြင့်သာ လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
ရေစက်ချပွဲသို့ မမေနွယ်သိန်း တစ်ဦးတည်းသာ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် လှူဒါန်းထားသော ပစ္စည်းများကို ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။ မတက်ရောက်ကြသော ဆေးကျောင်းအဖွဲ့ အတွက်လည်း မမေနွယ်သိန်းကပဲ ရေစက်ချပေး သွားခဲ့ပါတယ်။
1. Admin မှ မ,တည်ငွေ – ၅၀၀၀၀ (ငါးသောင်းကျပ်)
2. ဇော်ရဲသွင် (ချောကလက်မြို့တော်) ထိုင်ဝမ်တိုင်ပေ ၁၀၀၀၀၀ (တစ်သိန်းကျပ်)
3. မစိုးစိုးလွင် (ရန်ကုန်) ၂၀၀၀၀ (နှစ်သောင်းကျပ်)
4. Blogger ယမင်း (ရွှေမြန်မာ) ၁၀၀၀၀ (တစ်သောင်းကျပ်)
5. မြတ်နိုးငယ် (ဥရောပ) ၃၅၀၀၀ ကျပ် (သုံးသောင်းငါးထောင်ကျပ်)
6. ကျော်ဇေယျာဝင်း . . ၅၀၀၀၀ ကျပ် (ငါးသောင်းကျပ်)
7. သိန်းကျော်အေး (မုံရွာ) . . ၂၅၀၀၀ ကျပ် (နှစ်သောင်းငါးထောင်ကျပ်)
8. ဟော်တွန် (အနီ). . ၁၀၀၀၀ ကျပ် (တစ်သောင်းကျပ်)
9. Peace&Rose . . ၅၀၀၀၀ ကျပ် (ငါးသောင်းကျပ်)
3 Box Analysis